मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओ खुल्यो ,कहीले सम्म भर्न पाइन्छ ? – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:३८ Basanta Khanal	0 Comments	IPO niskasan
काठमाडौं : मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपीओ) बिक्री खुला भएको छ । बुधबारदेखि बिक्री खुला भएको आइपीओ यही साउन ३१ गतेसम्म खुला हुने कम्पनीले जनाएको छ । एक सय अङ्कित दरका कम्पनीको शेयरमा न्यूनतम १० कित्तादेखि बढीमा एक हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआइ मर्चेन्ट रहेको छ । तीन करोड ९३ लाख ७५ हजार बराबरको तीन करोड ९३ लाख ७५ हजार कित्ता आइपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरिएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभा बज्राचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार जसमध्ये पाँच हजार ४६९ कित्ता कर्मचारीको लागि र १९ हजार ६८८ कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ । बाँकी रहेको तीन लाख ६८ हजार ५९३ कित्ता सर्वसाधारणको लागि निष्काशन गरिएको हो। आइपीओ जारी भएपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी दश करोड ९३ लाख ७५ हजार पुग्नेछ । सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा तिनका शाखा कार्यालय र मेरो शेयर एप (सफ्टवेयर) मार्फतसमेत आइपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन ।
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – २७ साउन २०७८ बुधवारको राशिफल पढौं
बत्ती निःशुल्क बाल्न दिने सरकारकाे निर्णय (कती युनिटसम्म ?) →
अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले यातायात सेवा अवरुद्व
२८ माघ २०७७, बुधबार १६:१६ Basanta Khanal	0